खस्यौली। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, रुपन्देहीले सामुदाययिक वनमा लगाइएको कर हटाउन माग गरेको छ। महासङ्घले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वनमा करको बोझ थपिएको महासङ्घका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए। “स्थानीय र…
भाडामा कोठा नपाएपछि महानगरपालिकामा उजुरी
काठमाडौं। भाडामा कोठा उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी भाडामा कोठा उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । त्यसैगरी घर भाडा भाग…
सञ्चिता घिमिरे काठमाडौं। काठमाडौँको सडकमा हिँड्दा शौच लाग्दा शौचालय नभेटेर भौंतारिनुभएको त छैन ? अथवा शौचालय खोज्ने क्रममा हतारमै पनि बाध्य भएर चिया/खाजा खाने निहुँमा होटल रेष्टुराँ पस्नुभएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने अब त्यसको समाधान ल्याएको छ…
धम्बोझी। यस आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या २१ पुगेको छ। चार वर्षअघि २०७१ सालमा बाघको सङ्ख्या चार वटा मात्र रहेको थियो। वन्यजन्तु संरक्षण मञ्चका पूर्वमहानिर्देशक श्याम वजिमयले कार्यक्रममा नेपालमा पहिले १९८ वटा बाघको सङ्ख्या रहेको थियो…
वासुदेव पौडेल पाेखरा। अत्यधिक बाढीले कतै बस्ती नै डुब्यो, कतै पहिरोले घर जग्गा बगायो, मानवीय धनजनको क्षति यस्तै यस्तै खबर यतिखेर समाचारका पाना, अनलाइन, रेडियो एवम् टेलिभिजनमा पढ्न, सुन्न र देख्न पाइन्छ। देशका विभिन्न भूभाग बाढीपहिरोका कारण डुबानमा परिरहेका अस्थामा…
विष्णुमायाको ठेला ‘संघर्ष’
काठमाडौं । चाउँरिन लागेको अनुहार, एकदम शिथिल अनि भिजेको शरीर, जिर्गिङ्ग परेको कपाल, मसिना हातका पाखुरामा सानो चम्किलो घडी, पुराना मोडेलका हात्ती छाप चप्पल लगाएकी एक अधबैंशे महिला। यो काभ्रे स्थायी घर भएकी विष्णुमाया थापाको हुलिया हो। कान्ति बाल अस्पतालको…